Nepal - भाइको भने घरै छैन, कहाा खेल्ने भैलो !
भाइको भने घरै छैन, कहाा खेल्ने भैलो !
स्कुल पढ्दा गीत गाउन वल्लो–पल्लो गाउँ डुलिरहन्थे, पारस नेपाल । बनारस हिन्दु विश्वविद्यालय (बीएचयु) मा संगीत पढ्न गए, दुई वर्षपछि घाँटीमा समस्या आयो । पढाइ त्यहीँ रोकियो । गायन पनि रोकियो केही समय । तर, फेरि घनीभूत हुन थालेको छ, संगीतप्रतिको प्रेम । त्यसकै परिणाम हो, धरोहर गीति एल्बम । युट्युबमा सोलो ट्रयाक निकाल्ने यो जमानामा उनले ५ गीतको संग्रह निकालेका छन् ।
धरोहरमा कविवर माधवप्रसाद घिमिरे, क्षेत्रप्रताप अधिकारी, अमन मास्के, दिनेश अधिकारी र फूलमान वलद्वारा लिखित गीत छन् । संगीतचाहिँ सबै जुगल डंगोलको । यसअगाडि पारस आफैँले लेखेको गीत ‘नालापानी, कालापानी...’ गाएका थिए । यसपटक अन्य सर्जकका गीत रोजे । कारण यस्तो रहेछ, “वान म्यान आर्मी हुन मन लागेन । भिन्न भावना समेट्न पनि अरुका गीत गाएको हुँ ।”
शब्द चयनमा पनि अधिक चनाखा छन् पारस । संग्रहमा सन्देशप्रधान र काव्यिक शैलीका गीत छन् । पत्रकारिता र पुस्तक सम्पादनमा समेत सक्रिय पारस भन्छन्, “सुन्दा मात्र होइन, पढ्दा पनि आनन्द लागोस् । दोहोर्‍याएर सुन्न मन लागोस् भन्ने हेतुले गीत छानेको छु ।” कविवर घिमिरेको शब्दमा उनले गाएकै छन्, ‘भाइको भने घरै छैन, कहाा खेल्ने भैलो !...’
पारसले कान्तिपुर दैनिकका लागि लामो समय संगीतको रिपोर्टिङ गरे । त्यतिबेला लाग्थ्यो, नेपाली गीत शब्दका कारणले मात्र नेपाली हुन्छन्, संगीतमा नेपालीपन आभास हुन्न । यही रित्तोपन पूर्ति गर्ने प्रयास गरेका छन्, धरोहरमा । नेपालीपन आओस् भनेर मुर्चुंगा, बिनायो, धिमे, ढोलक, खीँजस्ता मौलिक बाजा बजाएका छन् । “अर्थपूर्ण शब्द र नेपालीपनले गीतलाई आयु दिन्छ र संग्रहणीय हुन्छ,” एल्बम तयार पार्न तीन वर्ष खर्चिएका पारस भन्छन्, “व्यापारिकभन्दा प्राज्ञिक महफ्व बोक्ने गीत गाउने प्रयास गरेको छु ।”
धरोहर पेनड्राइभ एल्बम हो । गीत र सर्जकका बारेमा सम्पूर्ण जानकारी गराइएको कभरको भित्र पेनड्राइभ छ । आठ जीबीको उक्त पेनड्राइभ खरिदकर्ताले गीत सुन्नका अलावा अन्य कामका लागि पनि प्रयोग गर्न सक्छन् । बोक्न सहज हुने भइहाल्यो । गायन पारसको मूल पेसा होइन तर अब गायनलाई निरन्तरता दिनेमा चाहिँ शंकै छैन । वर्षमा चार गीत सार्वजनिक गर्ने योजना छ उनको । भन्छन्, “सिर्जना आत्मामा निर्भर गर्छ । मेरा गीत मेरो आत्मासँग जोडिएका हुन्छन् ।”